संसदमा भीम रावलले भने– एमसीसी देश हित विपरित छ « Rara Pati
१५ साउन, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले संसदमा अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) एमसीसीमा रहेको देशहितविपरीतका रहेको बताएका छन् । देश हित विपरित रहेका प्रावधान नसच्याइ अनुमोदन गरिए त्यो राष्ट्रघात हुने रावलले बताएका हुन् ।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रावलले विभिन्न सन्धि–सम्झौताले देशको स्वाभिमानलाई चोट पुर्‍याउने गरेको बताए ।
उनले एमसीसीसँगै भएका अन्य सम्झौता पनि सार्वजनिक गर्न माग गरे । ‘त्यो जनताले थाहा पाउनुपर्छ। एमसीसीमा रहेको देशहितविपरीतका प्रावधान नसच्याइ अनुमोदन गरिए त्यो राष्ट्रघात हुनेछ । यसलाई संशोधन नगरीकन अनुमोदन नगरियोस्,’ उनले भने ।
यस्तै नेता रावलले कुनै सामरिक कुरासँग जोडिएर एमसीसी आए स्वीकार गर्न नसकिने बताए । ‘यसमा रहेका प्रावधान हटाएर, संशोधन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो कुनै सामरिक कुरासँग जोडिएर आउनु हुँदैन ।’
अमेरिकाका मन्त्रीले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको भनेर विज्ञप्ति जारी गरिसकेको उनले दाबी गरे । ‘अमेरिकका मन्त्रीले नै यो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत हो भनेर विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन् । अमेरिकी मन्त्री आधिकारिक हुन्छन् कि यहाँका व्याख्याता ? यहाँका व्याख्याताले होइन भन्दैमा हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे।
‘अहिले फेरि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अमेरिकी सरकारसँग हुन लागेको भन्ने सुन्दै छु,’ उनले भने,‘संसद्ले सम्झौता अनुमोदन नै नगरी कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? एमसीसीले नुवाकोटमा जग्गा अधिग्रहण कसरी सुरु गर्‍यो ? पाँचतारे होटेलमा कार्यालय खोलेर सञ्चारमाध्याममा एमसीसीको गीत गाउन कसरी मिल्यो ? नेपाली जनताको राजस्वको दुरुपयोग यसरी गर्न मिल्छ ?’